izay manana ny 12% amin’ny petra-bola amin’ny fitrandrahana nikela sy kobalta ao amin’ity orinasa goavana ity, raha fanapahan-kevitra noraisina satria tsy mahasehaka ny vola natontona ny famokarana nikela sy kobalta, raha ny fanazavan’ny Talen’ny fifandraisana amin’ny mpampiasa vola sy ny serasera Joe Racanelli. Mahatratra 33.733 taonina anefa ny nikela efa voakirakira ary 2900 taonina ny kobalta tao Ambatovy ny taona 2019. Ny fatiantoky ny orinasa noho ny antony maro, toy ny fitotonganan’ny vidin’ny nikela no antony. Ny famarotana ny anjara petra-bola sy asany na ny “action” ao anatin’Ambatovy no heverin’ny Sherrit fa vahaolana. Kendrena ho vita hatramin’ny 30 aprily ny fifanarahana mikasika an’izay, ka ny fahavitan’io fialany io dia hampihena ny trosan’ny Sherrit manodidina ny 450 tapitrisa Euros. Isan’ny miantoka ny fitazonana ny sandam-bola sy ny toekarena eto Madagasikara ny orinasa lehibe tahaka an’Ambatovy. Anisan’ireo orinasa tsy miankina hahitana mpiasa betsaka indrindra eto Madagasikara i Ambatovy. Tafiakatra hatramin’ny 9900 ny asa mivantana haterany, ka 3600 mpiasa an’Ambatovy ary 6300 ny mpiantoka asa. 93% dia Malagasy avokoa. Hisy ny varavarana misokatra hatao etsy amin’ny Gara Soarano ny 26 martsa-04 aprily izao hampafahantarana bebe kokoa an’Ambatovy